Air KBZ ငပလီ လေဆိပ်တွင် ဘီးကျိုး ပြေးလမ်းဘေးထိုးဆင်းရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Air KBZ ငပလီ လေဆိပ်တွင် ဘီးကျိုး ပြေးလမ်းဘေးထိုးဆင်းရ
Air KBZ ငပလီ လေဆိပ်တွင် ဘီးကျိုး ပြေးလမ်းဘေးထိုးဆင်းရ
Posted by ကထူးဆန်း on Feb 17, 2012 in Myanma News, News | 16 comments
ဲပြီးခဲ့တဲ့ ၁၅ မိနစ်ခန့် ၁၁:၁၅ လောက်မှာ ငပလီ လေဆိပ်အဆင်းမှာ Air KBZ ရဲ့ လေယာဉ် ဘီး ကျိုးသွားတယ် လို့ သတင်းရရှိပါတယ် ။ လူ အသေအပျောက်တော့ မရှိပေမဲ့ နဲနဲပါးပါးခိုက်မိတာတော့ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ် ။
လေယာဉ်မှုးရဲ့ ဆင်းသက်ပုံ ညံ့တာ လို့ စီးလာသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ် ။ ခေါင်းနဲ့ ထိုးစိုက် ဆင်းပြီး ရုတ်တစ်ရက် ငါးခါလောက် ဆောင့်သွားပြီး ဘေးလမ်းပေါ်ထိုးကျသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ် …
သံတွဲသားတို့ သတင်းရယူနိုင်မယ်ထင်ပါတယ် ။
ဲပြည်တွင်း လေယာဉ် နဲ့ ခရီးသွားသူ တစ်ဦး ကလည်း Air KBZ နဲ့ သွားမိတိုင်း အဆင်းတွေမှာ ညင်သာမှု့ မရှိဘဲ အမြဲ ခုန်လေ့ရှိလို့ သူ ဆို နောက်ပိုင်း ရှောင်လေ့ ရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ဖုန်းနဲ့ ရရှိတဲ့ သတင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် ပုံတော့ မတင်ပေးနိုင်ပါဘူး ။လေယာဉ်ကွင်းတာဝန်ရှိသူများက မီးပွင့်ထွက်တာတွေ တွေ့လို့ ဟိုတယ်များမှ ရေကားများ ကို အကူအညီတောင်းခံခဲ့ကြောင်းလည်း ကြားသိရပါသည် .
ဖုန်းနဲ့ ရရှိတဲ့ သတင်းမို့လို့ အမှားပါနိုင်ပေမဲ့ အရေးပေါ်တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတော့ တာဝန်ယူန်ိင်ပါသည် .
ကြောက်လိုက်တာ ငပလီကိုသွားရင် ဘယ်လေယာဉ်စီးရမလဲ…
ဓာတ်ပုံက ကိုသန်းထွဋ်ဦး သွားရိုက်နေတယ်
ကိုထူးဆန်းရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သတင်းကို အချိန်မဆိုင်း သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
အဲလိုလဲ ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ။နွားလှည်းတော့ မစီးပါနဲ့ ။နွားတွေလဲရှားတယ်ဗျာ။
ခိုင်းနွားကောင်းရင် ဘင်္ဂလားဖက်ပို့ နေကြတော့ နွားလှည်းတောင်အကောင်းမ
စီးရတော့ဘူး ကိုဖရဲရေ။လေယာဉ်ပျက်ကျပီဆိုလို့ ဆုတောင်းလိုက်ရတာ မဟုတ်
ပါစေနဲ့ ပေါ့။သံတွဲလေဆိပ်က ဒီတကြိမ်နဲ့ ဆို သုံးကြိမ်ရှိနေပီ။ပထမ တစ်ခါက
ပင်လယ်ထဲရောက်မှ ပျက်ကျတယ်။ဒုတိယအကြိမ်မှာ တော့ တောင်နံယံဝင်တိုက်
ပြီး မီးလောင်လိုက်တာ သေလိုက်ကြတာဗျာ။ခုတော့ တော်သေးတယ်။ကံကြီးပေ
ဟိုတခါ စစ်တွေမှာဖြစ်တာ နံပတ်(၁) ပိုင်းလော့ဆိုလား… ခုလဲ သူ့တပည့်တွေဖြစ်မယ်။
သူတို့ လုပ်တဲ့ training အကြောင်း သိကြပါသလား….
သင်္ကြန်ငပလီ သွားမလား လို့ စဉ်းစားထားတာ ။ အခုလိုပုံစံ နဲ့ ဆို ကမ်ဘောဇ ကို ရှောင်ရမယ် ။
ကိုပေ တကယ်လာမှာလား။အမြန်းဆုံးပြန်ဖြေလှည့်ပါ။ဒီမှာ ရှယ်စီစဉ်ပေးမယ်။
တဝကြီး ကစ်ကြတာပေါ့။ဆုံတုန်းလေး ခဏပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဖုန်းဆက်ဗျာ၊ဒါမှ
မဟုတ်ရင် ကျနော်ဆက်မယ်။ကျနော့်ဖုန်းက 0949653717နော်။
ဖုန်းနံပါတ်တော့ မှတ်ထားလိုက်ပြီ မစ်စတာထွဋ်ရေ
အဲမန်းက စစ်တွေမှာ လမ်းဘေးထိုးဆင်းတယ်..
အဲပုဂံကပူတာအိုကနေ မြစ်ကြီးနား အတက် မှာလမ်း ဘေးရောက်တယ် ။ ဟဲဟိုးမှာ လည်း ATR 42 မီးလောင်တယ်လို့ ကြားခဲ့ဘူးတယ် (ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး ၊ သူ့လေယာဉ် ART 42 တစ်စီး ဟဲဟိုးမှာ စောင်ခြုံပြီး တော်တော်ကြာကြာ ရပ်ထားတာတော့ တွေ့ခဲ့ဘူးတယ် ..
ရန်ကုန်အဲက မန္တလေးက အတက်မှာ စက်ချို့ယွင်းလို့ဆိုပြီး ပြန်ဆင်းခဲ့ရဘူးတယ် .. ပါလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ဇောချွေးပြန်ပြီး တွဲဆင်းရတဲ့ အဖြစ် ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ..
လေထဲမှာ အရေးပေါ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီး အောက်ဆီဂျင် မထွက်ဘူး ဆိုပြီး ငြင်းခုန်ခဲ့တာလည်းကြားခဲ့ ဘူးသေးတယ် ။ ဘယ်အဲလည်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး .။
ငပလီမှာ ပျက်ကျတာနဲ့ တောင်နဲ့တိုက်ပြီးမီးလောင်တာက မြန်မာ့ လေကြောင်း
အခု ကမ္ဘောဇ ဆိုတော့ အေးရှဝင်းဘဲ ကျန်တော့တယ် ကိုပေ ရေ..
နေဖူးတယ်ဆိုတော့ မလာချင်တော့ဘူးပေါ့။ကားလမ်းတွေလဲကောင်းနေပါပီ။လေအိတ်ကားတွေလဲ ပြေးဆွဲ
နေပီလေ။လေအိတ်ကားတွေက အောင်သစ္စာ၊ရဲအောင်လံ၊ရိုးမသစ္စာရယ် သုံးဂိတ်ရှိတယ်ဗျ။ရဲအောင်လံက
တော့ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် Europe Quality HIGER တွေနဲ့ ဆွဲပေးနေတာလေ။
သေချာလို့ကြေငြာ တာ မလား ၊ အိုခေ .. မှတ်ထားလိုက်ပီ
နောက်တော့မှ ဟိုဒင်း ဟိုဟာ မလုပ်နဲ့ ကိုနာဂရ ၊
သဲသောင်လေးမှာ ထိုင်ငေးပီး ကစ်ကြရအောင်လား ။
သူကြီး က မဖျက်ဘဲထားပေးတာနဲ့ ရတဲ့ ပုံထပ်တင်ပေးတာ နှစ်ပုံထပ်သွားတယ် ။ ဘယ်လိုပြန်ဖျက်ရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေလို့။ ပုံတင်လိုက်တာ Gallery ဆိုပြီး ပုံအတွဲလိုက်ဖြစ်သွားတယ် ။ ဘယ်လိုပြန်ဖျက်ရလဲ သိသူများ ကူပါဦး ..
ကိုထူးဆန်းရဲ့ ပုံလေးတွေက လေဆိပ်အတွင်းထဲထိကို ဝင်ရိုက်ထားနိုင်လို့ ပိုမြင်ရှင်းပါတယ်။ဒီတိုင်းလေးလဲ ကောင်းပါတယ်
@ဖိုးအာလူးရေ …လာလည်ပါဗျာ။ဖိတ်ပါရစေ။ဧည့်ဝတ်ပြုပါရစေ။ကျနော်က လာမယ့် မတ်လဆိုရင် ရန်ကုန်မှာရှိနေမယ်လေ။
ဧပြီမှာတော့ သံတွဲမှာဘဲဗျ။တွေ့ ချင်လိုက်တာ အကိုတို့ နဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။
ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ .. ငပလီ တစ်နေ့တော့ ပြန်ရောက်ဦးမှာပါ .. လမ်းတွေ ကောင်းသွားပြီဆိုလို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ် .. အရင် လမ်းမကောင်းလို့ တံတားကျိုးလို့ ကားပျက်ပြီး ကားလမ်းကြီးပိတ်သွားလို့ ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ဘဲ ရိုးပေါ်မှာ အိပ်ခဲ့ရတာ လည်း မမေ့သေးပါဘူး..
သဲပျောက်သွားလို့ ဘယ်ရောက်သွားလဲမေးတဲ့ ဆရာကြီးလည်း ပိုမြင်သာအောင် ရတဲ့ ပုံတွေ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ် လို့…
ဘာဘဲပြောပြော ဘေးထိုးရောက်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ရမယ် ..လမ်းပေါ်ကန့်လန့်ကြီးရပ်သွားလို့ ကတော့ နောက်လေယာဉ်တွေ အတက်အဆင်းလုပ်လို့မရဘဲ ဖြစ်မှာ..
ဟုတ်တယ် ကိုထူးဆန်းရေ အကိုပုံလေးတွေမြင်မှဘဲ ကိုနီဂိမိစိတ်ချယုံတော့မှာ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။လာလည်ဖို့ ခေါ်ပါရစေ။နေလသစ္စာကုမ္ပဏီကနေ BOT
စနစ်နဲ့ ယူထားတော့ အကောင်းကြီးမဟုတ်သေးပေမယ့် အရင်ထက်တော့